ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ စမ်းချောင်း ရှိ ရောင်းရန် စမ်းချောင်းမြို့နယ် ပြည်လမ်းမပေါ် Dagon Center နားအနီး KBZ Tower တွင် ရုံးခန်းဖွင့်သူတွေ အဆင်ပြေစေဖို့ (၁၆၁၀၀ စတုရန်းပေရှိတဲ့ အခန်းကျယ်မှာ အခန်း (၁၄) ခန်းပါဝင်သော ကွန်ဒို ငှားရန်ရှိပါသည်။, ကွန်ဒို | ShweProperty.com
ရောင်းရန် - ကွန်ဒို - စမ်းချောင်းမြို့နယ် ပြည်လမ်းမပေါ် Dagon Center နားအနီး KBZ Tower တွင် ရုံးခန်းဖွင့်သူတွေ အဆင်ပြေစေဖို့ (၁၆၁၀၀ စတုရန်းပေရှိတဲ့ အခန်းကျယ်မှာ အခန်း (၁၄) ခန်းပါဝင်သော ကွန်ဒို ငှားရန်ရှိပါသည်။
အခန်းတိုင်းကလည်း ကျယ်ဝန်းပြီး မှန်တွေနဲ့ အခန်းဖွဲ့ပေးထားလို့ ပြည်လမ်းမနဲ့ ရွှေတိဂုံဘုရားမြင်ကွင်းကိုလည်း တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ အခန်းတိုင်းနဲ့ မှာလည်း Vrv System Daikin Air Con တွေကိုတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ လေးကောင်းလေသန့် ရရှိစေဖို့ လေသန့်စင်ရေး စနစ်တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ မီးဘေး လုံခြုံရေးအတွက်လည်း Fire Sprinker System ၊ Wet Riser / Fire Hose နဲ့ Hose Reel ၊ Smoke Stop Lobby ၊ Emergency Stair Case နဲ့ Smoke Detector System တွေကိုိ တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ Herewith Attachment Are; 1. Simple Drawing Of Property 2. Apartment Dimensions is ; Approx ; Length 100ft x Depth 160ft ( Total Square Feet is 16,100) Air Condition system is as followed; 1 Daikin Air Conditioning Syatem VRV System (R-410A) 2. Ceiling Cassette Type with wireless remote Control System 3. 24 Indoor Units (FCU) and5Outdoor Units (Fully converage foe all room area) 4. Total Horsepower 98Hp 5. Mechanical Ventilation System for Hot air Exhaust and Natural Inlet Fully furnished for ceiling. Plumbing and Sanitary; 1. Rear Toilets : Male : 2WC +2Urinal +2Basin 2. Rear Toilets : Female : 3WC +2Basins 3. Front Toilets : Male : 3WC +2Urinal +2Basin 4. Front Toilets : Female : 4WC +2Basins 5. Other Toilets :2WC Electricity System; 1. Fully Dprinkler 2. We Riser / Fire Hose and Hose Reel 3. Smoke Stop Lobby 4. Emergency Stair Case 5. Smake Detector System
Property ID: S-1189367
အိမ်ခြံမြေ အမည် : စမ်းချောင်းမြို့နယ် ပြည်လမ်းမပေါ် Dagon Center နားအနီး KBZ Tower တွင် ရုံးခန်းဖွင့်သူတွေ အဆင်ပြေစေဖို့ (၁၆၁၀၀ စတုရန်းပေရှိတဲ့ အခန်းကျယ်မှာ အခန်း (၁၄) ခန်းပါဝင်သော ကွန်ဒို ငှားရန်ရှိပါသည်။
ပြည်လမ်းမပေါ် Dagon Center နားအနီ
** စမ်းချောင်းမြို့နယ် ဆင်နှစ်ကောင်Condoတွင် အခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။ **
စမ်းချောင်းမြို့နယ် အာရှတော်ဝင်ဆေးရုံနှင့် ဗဟိုလမ်းမ အနီးရှိ အဆင့်မြင့် ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေ ကွန်ဒိုခန်းရောင်းမည်
CSA-0570, ဟင်္သာတလမ်းကွန်ဒိုတွင် အကျယ်(1250sqft) ရှိ အခန်းအမြန်ရောင်းမည်။
CSA-0560, ခတ္တာလမ်းကွန်ဒိုတွင် အကျယ်(2000sqft) ရှိ အခန်းအမြန်ရောင်းမည်။
CSA-0539, ခေမာလမ်းကွန်ဒိုတွင် အကျယ်(1550sqft) ရှိ အခန်းအမြန်ရောင်းမည်။
CSA-0519 ဗားကရာကွန်ဒို (1250)Sqft ရှိအခန်း အမြန်ရောင်းမည်။
Code-7703 စမ်းချောင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ပြင်ဆင်ပြီး ကွန်ဒိုအခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
LT1901005459:2bedrooms unit for Sale in Sanchaung
CSA-0499, ခတ္တာလမ်းကွန်ဒိုတွင် အကျယ်(2000sqft) ရှိ အခန်းအမြန်ရောင်းမည်။
CSA-0487, မကြီးကြီးလမ်းကွန်ဒိုတွင် အကျယ်(2100sqft) ရှိ အခန်းအမြန်ရောင်းမည်။
CSA-0484, လမ်း 50 တွင် အကျယ်(30x50) ရှိ အခန်းအမြန်ရောင်းမည်။
CSA-0483, အရှေ့ကုန်းလမ်းတွင် အကျယ်(1250sqft) ရှိ အခန်းအမြန်ရောင်းမည်။
CSA-0471, ရွှေပိတောက်ကွန်ဒိုတွင် အကျယ်(1600sqft) ရှိ အခန်းအမြန်ရောင်းမည်။
CSA-0470, ၀င်ဆာ Estate Condo တွင် အကျယ်(2000sqft) ရှိ အခန်းအမြန်ရောင်းမည်။
CSA-0466, မင်္ဂလာလမ်းကွန်ဒိုတွင် အကျယ်(800sqft) ရှိ အခန်းအမြန်ရောင်းမည်။
CSA-0460, ဟင်္သာတလမ်းတွင် အကျယ်(1250sqft) ရှိ အခန်းအမြန်ရောင်းမည်။
CSA-0443, ဗားကရာလမ်းကွန်ဒိုတွင် အကျယ်(1600sqft) ရှိ ကွန်ဒိုအခန်းအမြန်ရောင်းမည်။
CSA-0438, ရတနာလမ်းကွန်ဒိုတွင် အကျယ်(1700sqft) ရှိ အခန်းအမြန်ရောင်းမည်။
CSA-0436, မအူပင်လမ်းကွန်ဒိုတွင် အကျယ်(23x50) ရှိ အခန်းအမြန်ရောင်းမည်။
CSA-0433, ပန်းခြံတာဝါတွင် အကျယ်(1150sqft) ရှိ အခန်းအမြန်ရောင်းမည်။
Advertiser : New Motion
Shweproperty ID: S-1189367
Mobile : 09970123461-4